चाईनाबाट खोसिएको बुढिगण्डकी बनाउन पुग्ला नेपाली पैसाले ? - samayapost.com
चाईनाबाट खोसिएको बुढिगण्डकी बनाउन पुग्ला नेपाली पैसाले ?
समयपोष्ट २०७४ पुष ३ गते १५:२८
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजेवासँग गरेको समझदारी खारेज गर्दै नेपाल आफँैले सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि गठित समितिले करिब एक महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको उपाध्यक्ष वाग्लेले जानकारी दिए ।
सरकारले गत कात्तिक २७ गते चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरेको थियो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब मानिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइरहेको पूर्वाधार करबाट आगामी दश वर्षमा रु एक खर्ब ६४ अर्ब रकम जम्मा हुने समितिले जनाएको छ ।
आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारले स्रोतका साथै प्राधिकरण र रकम जम्मा गर्ने विभिन्न निकायलाई समेत अगाडि सार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।